टेलिकममा साझेदार नल्याउँदा के हुन्छ ? | गृहपृष्ठ
Home समाचार टेलिकममा साझेदार नल्याउँदा के हुन्छ ?
on: February 06, 2019 समाचार
टेलिकममा साझेदार नल्याउँदा के हुन्छ ?
काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले मंगलवार नेपाल टेलिकमको १५औं वार्षिकोत्सवलाई सम्बोधन गर्दै टेलिकममा विदेशी रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने कुनै योजना नरहेको बताए । जब कि टेलिकमले गत असोज तेस्रो साता नै त्यससम्बन्धी प्रस्ताव सञ्चार मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ ।
टेलिकमको ३० प्रतिशत शेयर विक्री गरेर रणनीतिक साझेदार ल्याउने भन्दै टेलिकमले करीब १९ करोड रुपैयाँ खर्चेर आवश्यक विश्लेषण (डीडीए) गरिसकेको छ । टेलिकमले उक्त डीडीए सञ्चार मन्त्रालय हुँदै अर्थ मन्त्रालयको निजीकरण एकाइमा पठाइएको थियो ।
बेलायती कम्पनी एनालाइसिस म्यासन अन्तर्गतको एनालाइसिस म्यासन इण्डियाले टेलिकमको डीडीए गरेको हो । म्यासनले रणनीतिक साझेदारको बोलपत्र आह्वान गर्न आशयपत्र र प्रपोजल आह्वानको तयारी सहितको प्रतिवेदन तयार गरिसकेको थियो ।
प्रश्न उठेको छ, के टेलिकमलाई विदेशी रणनितिक साझेदार आवशयक छ त ? टेलिकमकी प्रवक्ता प्रतिभा वैद्य भने रणनीतिक साझेदार भित्र्याउँदा कम्पनी विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धामा जान सक्ने बताउँछिन् । त्यसैगरी रणनीतिक साझेदार भित्र्याउँदा टेलिकम प्राविधिक, आर्थिक र व्यवस्थापकीय पक्षमा नयाँ ढंगले अगाडि बढ्न सक्ने उनले बताइन् ।
करीब ५ महीना अघिसम्म टेलिकममा विदेशी रणनितिक साझेदार आवश्यक रहेको बताउँदै आएका मन्त्री बाँस्कोटाले डीडीए सम्पन्न भइसकेपछि रणनीतिक साझेदार आवश्यक नरहेको बताएका हुन् । उनले टेलिकममा विदेशी रणनीतिक साझेदार भित्र्याउँदा नेपालको पैसा विदेशिने बताउँदै नेपाली जनताको सम्पत्ति जनतालाई नै बाँड्ने बताए ।
टेलिकमकी प्रवक्ता वैद्यले सरकारको निर्देशनअनुसार नै टेलिकमले रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने विषयमा अध्ययन गरेको जिकिर गरिन् । उनले टेलिकममा विदेशी रणनीतिक साझेदार नभित्र्याउँदा टेलिकम प्रयोगकर्ताबाट करका रूपमा उठेको पैसा स्वदेशमै बस्ने बताइन् । उक्त पैसा सरकारले देशकै विकासमा खर्च गर्न सक्ने उनको तर्क छ । कार्यक्रममा मन्त्री बाँस्कोटोले फोरजी सम्झौता सकिए पनि अप्टिकल फाइबर लगायतका अन्य धेरै काम टेलिकमले गर्न बाँकी रहेको बताए ।